Ny malaza ao amin’ny bilaogy any Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2019 3:40 GMT
Ao anatin'ny fitsidihana ireo bilaogera Aziatika Atsimo tamin'ity herinandro ity, maro amin'izy ireo no mizara lohahevitra iraisana sy ny resaka fanatanjahantena, izany hoe ny cricket; sarimihetsika; sakafo; ary mazava ho azy ny politika.
Samad ao amin'ny Bangladesh Watchdog nanoratra lahatsoratra ny tatitra mikasika ny zon'olombelona ho an'i Bangladesh. Nayma, mpianatra siansa politika avy any New York manontany tena momba ny Andrim-panjakana sy ny Lalàmpanorenana ary tonga tamin'ny fahafantarana fa manana demaokrasia “Fifidianana” i Bangladesh. Mizara ny heviny momba an'i Bangladesh izy ary mampitaha izany amin'ny firenena sasany hafa eto amin'izao tontolo izao.
Niharan'ny fanadihadiana lalina ny finday sy ny mpampiasa azy ary manana lahatsoratra momba ny fanaraha-maso ara-moraly sy ny fampiasana finday any Bangladesh i Drishtipat.
Manana sary avy any Bangladesh ireo lahatsoratra bilaogy roa ireo. Bonlebon indray manana rohy mikasika ny toerana ifatesan'ireo sambo manerana izao tontolo izao? Amy kosa mizara ny sarin'i Dhaka.
Tsy manana bilaogera marobe ity firenena mihiboka, Bhutan, ity. Rossputin manana vaovao farany ara-politika momba ny firenena tamin'ny alàlan'ny namany ao Bhutan. Hisotro ronono afaka roa taona ny mpanjaka amin'izao fotoana izao ary ny zanany lahy no homaniny handimby azy. Ary nanipika i Cyborg tamin'ny adihevitra nataony momba ny boky Bodista fa namorona ny teny hoe Gross National Happiness (Harim-Pahasambarana Faobe) ny mpanjaka ankehitriny.
Matetika lohahevitra mafana amin'ny adihevitra eo amin'ireo bilaogera Indiana ny teknolojia, sy ny zavatra hafa ara-teknika. Amin'ity herinandro ity isika mijery ny Apple, orinasa tsy dia mahasarika be loatra any India raha ampitahaina amin'ny Microsoft. Inona no hevitr'ireo bilaogera momba ny orinasa sy ny vokatra vokariny? Manana fomba fijery roa mahaliana momba io lohahevitra io isika. Amalgalm of Thoughts manana fijery mahaliana momba ny iPod-n'ny Apple. Tsy iPod izany, hoy izy ireo, fa i iPlod. Vakio izany mba hahafantarana ny antony iantsoany azy hoe iPlod. Manjaka ao an-tsain'ny bilaogera iray hafa ny Apple – Mandar manoratra momba ny Fifaninanana Zava-baovao iPod sy Steve Jobs, Filoha tale jeneralin'ny Apple.
Abhilash avy amin'ny Sania Mirza India's Teen Pride manoratra momba ny Australian Open performance. Mafana any India ny cricket ary ity ny sary avy amin'i Dineshb miresaka izany. Hoy ianao hoe vanim-potoanan'ny baolina kitra sy Superbowl? Mandehana any India mba hijery ny hafanan'ny cricket.
Anurag Jain manana fitsidihana tsara ny Fetiben'ny sarimihetsika Tri-Continental nokarakarain'ny Breakthrough, Fikambanana momba ny Zon'Olombelona. Misy ireo sarimihetsika sasantsasany mahaliana avy any Afrika Atsimo, Shina ary Amerika Latina. Tsy dia mahazatra loatra ny mijery lahatsoratra bilaogy momba an'i Chattisgarh, firenena Indiana vaovao izay nisy dimy taona lasa izay. Saurabh manana fitsidihana tsara momba an'i Chattisgarh.
Volavolaina tsy tapaka tany India ny Neologisma, na ireo teny vaovao ary angamba zavatra voajanahary any amin'ny fiarahamonina mahay fiteny maro. Ohatra, mahazatra ny manakambana fiteny Indiana amin'ny teny Anglisy, ary mahazo teny vaovao ianao avy eo. Word Mint nanova ity fotoam-pialam-boly ity ho toy ny endri-javatra tsy tapaka ary manana blaogy hanehoana ny ezaka ataony. Mampiseho hatrany teny vaovao sy mahaliana ity vondron'olona mpamorona ity. Vakio.
Niditra tamin'ny fiainana manokan'ireo mpilalao ny fitiavana cricket tafahoatra. Mpilalao Pakistaney roa no nampiato ny tetikasa fanambadian'izy ireo noho ny vanim-potoanan'ny cricket. Vakio ato izany. Toa tsy tao an-tsain'ireo mpilalao cricket ihany ny fotoanan'ny fanambadiana, fa koa lohahevitra mafana ho an'i Sami. Mitsidika an'i Pakistana avy any UK izy ary Britanika teraka Desi, ary mizara ny heviny sy ny sarin'ny tanànan'i Lahore.
Karachi Metroblogging manoratra fa hanao fampisehoana mivantana amin'ny 29 Janoary 2006 ilay mpihira Bryan Adams. Mankafy ny sakafon'izy ireo sy ny ditean'izy ireo ny Aziatika tatsimo. Fahd miresaka ny toerana fisotroana dite tiany indrindra ao an-tanànan'i Wah. Metroblogging Islamabad manonona ny fiantraikan'ireo mpifindramonina Afghana eo amn'ny resaka sakafo: ny frity frantsay miaraka amin'ny chutni Afghana, izay tena zava-baovao tanteraka ho an'izany sakafo izany.
ZindagiXP manana blaogy mahaliana momba ireo olona fohy kely (nains) sy ny goavambe – ahoana ny fomba fitondran-tenan'ireo mpanao politika raha oharina amin'ny mpandraharaha?
Nepal Law manana ny lisitr'ireo mpikatroka ny zon'olombelona nosamborin'ny governemanta tamin'ity herinandro ity. Manodidina ny 89 ny fitambaran'ny fisamborana, ka anisan'izany ireo mpanao politika. Democracy of Nepal an'ny Parmendra Bhagat mizara ny fomba fijeriny momba ny fivoarana farany ao Nepal.